चोरलाई झुक्याउन नक्कली फोनहरु विक्री – MeroOnline Khabar
चोरलाई झुक्याउन नक्कली फोनहरु विक्री
काठमाडौं । लुटपाटको घटना अत्याधिक वृद्धि भएपछि मेक्सिकोको राजधानीमा स्थानीयहरुले यसको सामना गर्न अनौठो उपाय अपनाइरहेका छन् ।
अपराधीहरु विशेष गरी व्यक्तिको मोबाइल फोनको पछि लाग्ने गरेको हुँदा चोरलाई सुम्पिनकै लागि मानिसहरुले हुबहु देखिने नक्कली फोन खरिद गर्न शुरु गरेका हुन् । यसरी अहिले थुप्रै बजारहरुमा गोप्य रुपमा १८० देखि ८०० पेसो सम्मका नक्कली फोनहरु विक्री भइरहेका छन् ।
विशेष गरी सार्वजानिक सवारीमा यात्रा गर्दा वा एकाबिहान वा राति पैदल यात्रा गरिरहेका मानिसहरु लुटेराको शिकार हुने गरेका छन् । यस्तोमा फोनका साथै त्यस भित्रका डाटा सुरक्षित राख्न मानिसहरुले चोरलाई झुक्याउन यो तरिका अपनाउन थालेका हुन् ।
यसरी सो फोनको स्क्रिन वास्तविक मोबाइल जस्तै हुन्छ भने त्यस भित्र राखिएको धातुले यसको तौल पनि असली फोनको जस्तै बनाई दिन्छ । यसरी राजधानी मेक्सिको सिटीमा हुने गरेका चोरीका घटना पछिल्लो समय सामाजिक संजालमा पनि भाइरल भइरहेका छन् ।
यसबीच कसैले उनीहरुले भनेको नमानेमा पेस्तोलले तिनको टाउकोमा प्रहार गर्ने र कतिपय अवस्थामा गोली समेत चलाउने गरेको पाइएको छ जसपछि पीडितहरु बसको भुईँमा रगताम्मे अवस्थामा फेला पर्ने गरेको बताइन्छ ।
यसकारण पनि त्यहाँका स्थानीय डराइ डराइ जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । त्यहीँकी एक स्थानीय शिक्षिका, मार्था पाट्रिका रोसिल्स, जो आफैँ पनि धेरै पटक लुटिएकी छन्, भन्छिन्, ‘हामीले पैसाबारे सबैभन्दा सावधानी अपनाउनु पर्छ किनकी यदि उनीहरुले मागेका बेलामा हामीले पैसा बोकेका छैनौँ भने चोरहरुले रिसाएर गोली चलाई दिन सक्छन् ।’
यसरी मेक्सिकोमा २०१९ का सुरुवाती चार माहिनामा मात्र दिनदिनै हुने यस किसिमका ७० भन्दा धेरै हिंसात्मक अपराधका घटना रिपोर्ट गरिएको छ । यसमध्ये दुई तिहाइ बाटोमा हिंडिरहेका बेला हुने र यसपछि बस लगायत सार्वजानिक सवारीमा हुने गरेको बताइएको छ । २०१७ र १८ का बीच मात्र मेक्सिकोमा अपराधका घटना २२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
त्यसैकारण कतिपय मानिसले दुई वटा फोन बोक्ने गरेको उनी बताउँछन् – एउटा वास्तविक प्रयोजनका लागि र अर्को एकदमै सस्तो मुल्यमा लुटेराहरुलाई सुम्पिनका लागि । यसरी पछिल्लो १४ वर्षदेखि त्यहाँ नक्कली फोन विक्री हुँदै आएको अर्की एक विक्रेता बताउँछिन् । तर पहिले त्यसको प्रयोग स्मार्टफोन फर्मममा प्रदर्शनका लागि हुने गरेको र पछिल्लो समय मात्र यसलाई चोरबाट बच्ने साधनका रुपमा प्रयोग गर्न थालिएको उनले बताइन् ।
← स्पेनमा फोहर बोक्ने ट्रकको ठक्करबाट एक जना नेपालीको मृत्यु
हार्दिक श्रद्धाञ्जली ! साउदी बाट आयो दुखद खबर ! परिवारमा रुवाबासी ! →
इन्डोनेशियाको राजधानी जाकर्ता समुन्द्रमा डुब्नै लागेको हो?
दाहासंस्कार गर्न ठिक गरिएका रामकिशोर जुरुक्क उठेर भने, मलाई गल्तीले लगेको थियो, फेरी फिर्ता पठाइदियो